China HEPA Air Purifier Air Cleaner Personaltype Manufacture and Factory | Kennedy
Arovy ny fahasalamanao: Ny mpanadio rivotra HEPA anay dia manana rafitra fanivanana mahomby izay matanjaka ampy hisambotra vovobony, setroka, fofona ary dandy biby fiompy. Afaka manivana poti kely toy ny 0.3 microns sy PM 2.5 izy, afaka mampivezivezy in-5 ny rivotra ao anatin'ny 30 minitra ao anatin'ny tontolo anatiny 215 metatra toradroa (20 metatra toratelo).
Rafitra fitsaboana mialoha ny rivotra: Azonay mazava tsara ny ahiahinao, ary efa nanao andrana tsy tambo isaina momba ny rafitra fitsaboana mialoha ny rivotra izahay.
Tamin'ny alalan'ny andrana dia hitanay fa raha mbola mihoatra ny 200nm ny halavan'ny onjan'ny taratra ultraviolet, dia tsy hisy akora mampidi-doza hamokatra.
Mandoa faktioran-jiro kely: Raha jerena ny fitsitsiana angovo sy ny fampihenana ny faktioran-jiro, ny mpanadio anay dia manana fiasa ara-potoana sy asa fanitsiana ny hafainganam-pandehan'ny rivotra. Azonao atao ny manapa-kevitra amin'ny hafainganam-pandeha sy ny faharetan'ny fanadiovana araka ny hevitrao manokana, mampihena be ny faktioran-jiro.
Manadio amim-pahanginana ny rivotra iainanao:
Ny jiro amin'ny alina dia azo ON / OFF amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra. Manadio ny rivotrao ary manazava ny lalanao. Tsara ho an'ny nightstand ao amin'ny efitrano fatoriana na eo ambony latabatra.
Afaka mifoka rivotra amin'ny tombontsoa tsy mikorontana ianao rehefa matory.
Haben'ny vokatra: 160mm * 171mm * 247mm
Haingam-pandeha: fifantenana hafainganam-pandeha 4
Ora: 1/4/8 ora
Fomba rivotra: fomba rivotra 4: avo, antonony, ambany, torimaso
Fanaraha-maso ny switch mikasika: Hery, hafainganam-pandehan'ny mpankafy, Timer, Mode torimaso, famantarana fanoloana sivana, hazavana.
Fahazavana: Ambient Light Display
Boaty hanitra: Eny (afaka manampy huile essentielle)
Fampiasana: sterilization rivotra anatiny, Deodorizing, Airfreshening, H13 sivana, matory fomba
Cable na plug: Ampidiro tariby herinaratra AC
AC na DC: AC
Haben'ny famokarana Φ160*247（mm）
isa-minitra Haingam-pandeha ambony: 2800rpm
Haingam-pandeha antonony: 2000rpm
Hafainganam-pandeha ambany: 1200 Rpm
fahefana Max 19W
Smart panel, mora karakaraina
Miaraka amin'ny boaty hanitra, afaka manova ny fofona tianao
Miaraka amin'ny sidina HP13, mora ovaina
teo aloha: Fanadiovana rivotra marika KENNEDE ho an'ny fampiasana efitrano lehibe an-trano